चैत्र २२- राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइडबडी जहाजले बेलायत, जर्मनी र क्यानाडामा चार्टर्ड उडान गर्ने भएको छ । विपद्को उडान सारथी बनिरहेको निगमको वाइडबडी जहाजले यसै साता ती गन्तव्यको उडान भर्ने तयारी गरेको हो । निगमका अपरेशन विभाग प्रमुख दिपु जहार्चनले लण्डन, फ्राङ्कफर्ट र क्यानाडा उडानको प्रारम्भिक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यी तीनवटै गन्तव्यमा निगमको वाइडबडी जहाजले सिधा उडान गर्नेछन् । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लण्डन गन्तव्यमा करिब साढे १२ घण्टाको उडान भर्नुपर्ने हुन्छ । वाइडबडीले लण्डनबाट क्याना र जर्मनीको उडान भर्नेछ । निगमले शुरुमा बोइङ ७६७ जहाजमार्फत लण्डन, पेरिस र फ्राङ्फर्ट उडान गरेको थियो । जहाज अभावलगायत कारण देखाउँदै बिचमै सेवा रोकेको थियो । निगमले वि.स. १९८८ मा युरोपका गन्तव्यमा उडान भरेको थियो । युरोपका ती गन्तव्यमा दुबई भएर उडान गरिन्थ्यो । निगमका पूर्व निर्देशक रामहरी शर्माले निगमले देशलाई अफ्ठयारो परेकाबेला सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले अहिले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएको बताउनुहुन्छ । आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको निगमको हालको अवस्थालाई सुधारी सवल बनाउन सरकारले पनि यसको अवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई बुझेर प्रवद्र्धनमा ध्यान निदुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
हाल दुई वाईडबडी ए–३३० र दुई थान न्यारोबडी ए—३२० सिरिजको जहाजबाट निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ । निगमको वाइडबडी जहाजले गत फागुन ४ गते कोभिड पहिलो पटक फेला परेको चीनको वुहान शहरबाट नेपालीको उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याएको थियो । विंस. २०६२ को गोरखा भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दीका बेला पनि निगमको जहाजले उद्धार उडान र कार्गो उडान गरेको थियो । देशका राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको विशिष्ट भ्रमणमा पनि निगमकै जहाज प्रयोग गरिने गरेको छ । त्यसैले विपद्को सारथी बनिरहेको राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई हालको अवस्थालाई सुधारेर संस्थागत क्षमता विकास र सुदृढिकरण र सवलीकरणका लागि राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।